भोलि देखी फेरी कडा लकडाउन सुरु हुँदै ! बिहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म पसल खोल्न पाईने – Sandesh Press
July 30, 2021 212
काठमाडौं । अर्घाखाँची जिल्लामा साउन १६ गते(शनिबार) राति १२ बजेदेखि पुनः लकडाउन हुने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो । लकडाउन साउन ३० गते राति १२:३० सम्म जारी रहने छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा चलिरहेको डीसीसीएमसी र पालिका प्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले जिल्ला नै सिल गर्ने सहमति भएको झापामा प्रहरी उपरीक्षक सानुराम भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोरोनाको पहिलो चरण कै जस्तो कडाइका साथ सिल गरिनेछ ।काठमाडौं । अर्घाखाँची जिल्लामा साउन १६ गते(शनिबार) राति १२ बजेदेखि पुनः लकडाउन हुने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो । लकडाउन साउन ३० गते राति १२:३० सम्म जारी रहने छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा चलिरहेको डीसीसीएमसी र पालिका प्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले जिल्ला नै सिल गर्ने सहमति भएको झापामा प्रहरी उपरीक्षक सानुराम भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोरोनाको पहिलो चरण कै जस्तो कडाइका साथ सिल गरिनेछ ।
Prevआज झन् उकालो लाग्यो कोरोना संक्रमण, थप २७ ले ज्यान गुमाए
Nextदुख’त खबर ! काठमाडौँको जरङ्गखुबाट काभ्रेस्थली जाँदै गरेको बस दुर्घटना
दुबईबाट नेपाल फर्किएका १ सय १ जना महिला मध्ये ९४ जना गर्भवती !
कतार प्रहरीमा नेपालीको लागि बाटो खुल्यो ! कसरी जाने, कती हुन्छ तलब ? थाहा पाउनुहोस्